सेमील्ट विशेषज्ञ: तपाई, हो, तपाई! के तपाईं भूत रेफरर स्प्याम के थाहा छ?
भूत रेफरल वा रेफरर स्प्याम नकली ट्राफिक हो जुन तपाईंको Google Analytics खातामा देखा पर्दछ। तथापि, जब तपाईं नजिकको जाँच गर्नुहुन्छ हिटहरू कहाँबाट आउनुहुन्छ, तपाइँ देख्नुहुन्छ कि तिनीहरू एक रेफरल वेबसाइटबाट हो र ठूलो हदसम्म तपाईंको उछाल दर बढाउँछन्। हाल, Google Analytics डाटालाई असर गर्ने दुई प्रमुख प्रकारका भूत रेफरलहरू छन्। पहिलो, त्यहाँ स्प्याम बोट्सहरू र क्रलरहरू छन् जुन तपाईंको वेब पेजहरू अनुक्रमणिका र रोबोट.txt फाइलहरू बेवास्ता गर्छन्। दोस्रो प्रकार दारोड हो, जुन अवैध ट्राफिक उत्पादन कार्यक्रमको रूपमा पहिचान गर्न सकिन्छ। रयान जॉनसन, सेल्टल्ट ग्राहक सफलता प्रबन्धकले बताउँछ कि मुख्य मुद्दा यो हो कि भूत रेफरल स्प्याम एकाधिक डोमेनबाट आउँछ, जसमा प्रायः वयस्क विषयवस्तुहरू छन् र घडीका वेबसाइटहरू हिट गर्दछ।
स्प्याम बटहरू र भूत रेफरलहरू बीचको भिन्नता यातायातको गुण हो। भूत रेफरर स्प्यामलाई नयाँ र अज्ञात डोमेनहरूबाट ट्राफिक पठाउँछ, तर कहिलेकाहीँ तपाइँ वास्तवमा तपाइँका वेबसाइटहरू भ्रमण गर्नुहुन्न। यसको सट्टा, तिनीहरू तपाईंको Google एनालिटिक्स खाताहरू प्रभावित र तपाईंको उडान दर बढ्ने डिजिटल ट्रेलहरू छोड्दछन्। तिनीहरू तपाईंको गुगल एनालिटिक्स कोडहरू ट्र्याक गर्न उद्देश्य राख्छन्, र तपाइँ तिनीहरूलाई आफ्नो खातामा फिल्टरहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। यस तरिका, तपाईं आफ्नो विश्लेषक डेटा नष्ट गर्न भूत रेफरल स्प्याम रोक्न सक्षम हुनेछ।
के भूत रेफ्रर स्पाम मेरो एसईओ वा वेबसाइटमा असर गर्छ?
यो उल्लेख गर्न सुरक्षित छ कि भूत रेफरर स्प्यामले तपाईंको एसईओ वा वेबसाइटलाई असर गर्दैन। जस्तै हामीले पहिले नै वर्णन गरेका थियौँ कि तिनीहरू वास्तवमा तपाइँको वेबसाइट भ्रमण गर्दैन तर तपाईंको गुगल एनालिटिक्स डेटाको शीर्ष सन्दर्भमा देखा पर्दछ।.यद्यपि, यसले तपाईंको डेटा र विश्लेषण रिपोर्टलाई असर गर्छ। भूत रेफरर स्पामले तपाईंको साइटलाई सारा दिन हिट गर्दछ र 24 घण्टामा एक हजार हिट सम्म देखाउँछ।
भूत रेफ्रर स्पामले तपाईंको साइटमा निम्न चीजहरू गर्दछ:
यो तपाईंको वेब पेजहरु को समग्र उछाल दर धेरै बढ्छ।
यसले तपाईंको ब्लग वा साइटमा दर्शकहरूको संख्या घटाउन सक्छ।
यो रेफरल डाटा स्केज गर्दछ र तपाईंलाई यो कठिन छ कि ट्राफिक भनेको गुणस्तर हो कि छैन कि छैन।
यसले लक्ष्य परिवर्तन र स्थान डेटालाई रोक्छ, तपाईंलाई रूसबाट धेरै भ्रमणहरू पठाउँदछ।
रेफ्रर स्प्यामरहरूले तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खाताहरूमा डेटा कसरी पठाउँछन्?
तपाईँको जाभास्क्रिप्ट कोडमा, एक ट्र्याकिङ आइडीले गुगल एनालिटिक्सलाई बताउँछ जुन रेफरल वेबसाइटले तपाइँलाई ट्राफिक पठाउँछ। स्प्यामरहरू नक्कली दर्शकहरू पठाउँछन् र तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खाताहरूमा हिट गर्न निम्न तीन विधिहरू प्रयोग गर्छन्:
1। तिनीहरू जाभास्क्रिप्ट कोडहरू तिनीहरूको आफ्नै वेबसाइटहरूमा घुसाउनुहोस् र हिटहरू आफ्नो वेब पेजहरूमा उत्पन्न गर्नुहोस्।
2। तिनीहरूले स्वचालित वेबसाइटहरू तपाईंको सूचकांक सूचित गर्न, रेफ्रिजहरू फ्याक गर्न र धेरै भ्रमणका लागि देखाउन स्वचालित बट्टिहरू सेट गर्दछन्।
3। तिनीहरूले विशेष रूपमा तपाईंको गुगल एनालिटिक्समा डाटा पठाउन विशिष्ट बटहरू सेट अप गरे र वास्तविक रेफरल साइटहरू समावेश गर्दैनन्।
भूत रेफ्रर स्पामलाई रोक्नको सबैभन्दा उत्तम तरिका फिल्टरहरू सिर्जना गर्न वा तपाईंको .htaccess फाइल सम्पादन गरेर। तपाईं धेरै फिल्टरहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ जुन संदिग्ध हिटहरू तपाईंको गुगल एनालिटिक्स डाटा बर्बाद गर्नबाट रोक्न चाहानुहुन्छ।